COMPANIES → होलसेल • निर्माता • P&M वितरकको लागि कम्प्युटर कढ़ाई
कम्पनीहरूका लागि प्रस्ताव
यो हामीसँग काम गर्न किन उपयोगी छ?
हामी विज्ञापन र कामको लुगा बिक्री र वितरण मा विशेषज्ञता एक कम्पनी हो। हामी कपडा मात्र होइन, तर कपडाले यो विधि प्रयोग गरेर मार्किंग पनि प्रदान गर्दछौं कम्प्युटर कढ़ाई र स्क्रिन प्रिन्टि।।
तपाईंको कम्पनीलाई आज दर्ता गर्नुहोस् र आकर्षक छुट प्राप्त गर्नुहोस्! >>
हाम्रो योग्य स्टाफहरू धेरै वर्षको अनुभवको साथ उत्कृष्ट अंकन प्रविधिको डिजाइन र चयनमा मद्दत र सल्लाह दिन खुसी हुनेछन्। हामीसँग विज्ञापन एजेन्सीहरू र प्रसिद्ध ब्रान्डहरूको लागि सिलाई, काट्ने र डिजाईन गर्ने विस्तृत अनुभव छ।
२०० Since देखि, हामी सिलाई, काट्ने, इस्त्री गर्ने र लेबलिंग सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छौं। हामीसँग आफ्नै सिलाई कोठा र मेशिन पार्क छन्। हामीसँग उत्पादनहरूको एक विस्तृत श्रृंखला छ - ,2003००० भन्दा बढी उत्पादनहरू, वर्कवेयर र विज्ञापन लुगाहरू धेरै आकर्षक मूल्यहरूमा मान्यता प्राप्त उत्पादकहरूको। तपाईं दुबै कपडा र लेबलिंग सेवाहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ (कृपया हामीलाई एक निजीकरण उद्धरणको लागि अग्रिम सम्पर्क गर्नुहोस्) हाम्रो वेबसाइटमा www.pm.com.pl वा Allegro मा हाम्रो पसलमा "उत्पादक- BHP"।
हाम्रो सिलाई कोठाले सुनिश्चित गर्दछ कि हामीले उत्पादन गरेका उत्पादनहरू उत्कृष्ट कार्यात्मक गुणहरू र सबै भन्दा उन्नत रye्ग र फिनिशिंग टेक्नोलोजीहरूको साथ उच्च गुणस्तरका कपडाहरूबाट बनेका छन्। हामी हाम्रो डिस्पोजलमा उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोगको माध्यमबाट धेरै नै माग गर्ने ठेकेदारहरू पूरा गर्न सक्षम छौं।
हामी लचिलो छौं - हामी ग्राहकको आवश्यकतालाई तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन्छौं - दुबै उत्पादन र औपचारिक मामिलाहरूमा। हामी हाम्रो स्टोरमा खरिद गरिएका र ग्राहक द्वारा डिलिभर गरिएका दुवैमा कढ़ाई र स्क्रिन प्रिन्टि ofको सेवा प्रस्ताव गर्दछौं। थप रूपमा, हाम्रो वेबसाइटमा रेजिष्टर गरेर, खरीद गर्दा, तपाईं दोस्रो अर्डरबाट अतिरिक्त छुट पाउन सक्नुहुन्छ।
हामी प्रत्येक अर्डरमा व्यक्तिगत रूपमा आउँछौं, यसको प्रत्येक चरणमा यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दछौं। हामी ग्राहकहरु र पेशेवर पर्याप्त हेरचाह संग खुला संचार मा हाम्रो विश्वसनीयता निर्माण।
कम्प्युटर कढ़ाई - प्रतिष्ठित निजीकृत
विशेषज्ञ कपडा सहित - विभिन्न प्रकारका कपडाहरूको उत्पादन मात्र हाम्रो प्रस्तावको अंश हो। सहयोगको भागको रूपमा, हाम्रा ग्राहकहरूले धेरै थप सेवाहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि प्राप्त गर्छन्। हामी पनि एक कढ़ाई कार्यशालाको रूपमा गतिशील रूपमा संचालन गर्छौं, जुन गर्वका लागि हाम्रो सब भन्दा ठूलो कारण हो।
कम्प्युटर कढ़ाई कपडा लेबल गर्ने उत्कृष्ट गुण, रमणीय र टिकाऊ तरीका हो। विशेष प्राविधिक सुविधाहरूको प्रयोग गरेर हामी कुनै पनि, कुनै पनि आकारको कपडामा कुनै पनि आकारको एकदम सटीक बान्की बनाउन सक्षम छौं। हामी अधिकांश प्रकारका कपडा (पोलो शर्ट, टी-शर्ट, कामका लुगाहरू, एप्रोन, टाई, स्कार्फ) मा कढ़ाई अनुप्रयोगहरू बनाउँछौं। हामी कपडाको प्रकारबाट पनि सीमित छैनौं - हाम्रो कारखानामा एक पेशेवर सिलाई र काट्ने कोठा छ, त्यसैले हामी तपाईंको लागि तयार पारेको गुणस्तरमा पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। कम्प्युटर कढ़ाई कार्यशालाले प्रस्ताव गरेको सम्भावनाहरू कम्पनीले वर्कवेयर र विज्ञापनको पोलिश बजारमा काम गर्ने सेवाहरूको लागि ठूलो फाइदा हुन्छ।
तिनीहरूले हामीलाई विश्वास गरे, अरूहरूमाझ:
- मर्सिडीज बेन्ज
- पूरिना प्रोप्लान्ट
- १ मिनेट याकूब
- स्टक प्रतिष्ठा
र अन्य धेरै। हाम्रो मा अधिक हेर्न पसल। हाम्रो अघिल्लो परियोजनाहरू देखाउँदछ कि परियोजनाको पर्वा नगरी हामी विश्वसनिय र समयमै अर्डरहरू गर्न सक्षम हुन्छौं।
स्क्रिन प्रिन्टिंग - विज्ञापन मार्किंग
यो मार्किंग को एक सबसे अधिक चयनित प्रकार हो, जुन हामी पनि प्रस्ताव गर्न सक्षम छौं। यो सेवा केवल टिकाऊ मात्र छैन र उत्कृष्ट गुण प्रदान गर्दछ, तर प्रत्येक ग्राफिक डिजाइनको रंग प्यालेट पनि सहि प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसको उन्नत टेक्नोलोजी र सटीकताको लागि धन्यवाद, हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उत्तम सम्भावित गुणहरू प्रदान गर्न सक्षम छौं, जब यो कपडा आफैंमा आउँछ, साथसाथै लोगो उनीहरूमा एम्ब्रोइड गरिएको छ, प्रिन्ट गरिएको शिलालेख वा ग्राफिक्स। हाम्रा सेवाहरूको पूरकताको कारण, हामीसँग समाप्त परियोजना निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा नियन्त्रण छ।
द्रुत वितरण हाम्रो लक्ष्य हो
हामी ग्राहकहरूलाई अर्डर पोल्याण्डका साथै विदेशमा पनि डेलिभर गर्दछौं। हामी मुख्य रूपमा DPD कुरियर मार्फत सामान ढुवानी गर्दछौं। ठूला अर्डरहरूको लागि, ग्राहकको अनुरोधमा, हामी गोदाममा यातायात व्यवस्थित गर्दछौं। हामी धेरै आकर्षक मूल्यहरु मा नियमित आदेश संग सहयोग गर्न सक्षम छौं। रवा माजुविसेका मुख्यालयमा व्यक्तिगत संग्रहको पनि सम्भावना छ।